तपाईंको प्रतिष्ठा बढाउनुहोस्: कसरी ब्रान्ड पहिचान बनाउने - Print Peppermint
नोभेम्बर 28, 2019 | ब्रान्डिङ, उद्यमी, सुरूवात
एक सफल कम्पनी को निर्माण को लागी एक कुञ्जी बजार मा एक अद्वितीय उपस्थिति भएको छ। यस लेखमा, हामी तपाइँलाई देखाउनेछौं कसरी ब्रान्ड पहिचान बनाउन.
भर्खरको अध्ययनमा, अनुसन्धानकर्ताहरूले पत्ता लगाए कि बहु प्लेटफर्महरूमा लगातार ब्रान्ड सन्देश भएको व्यवसायले राजस्व बढाउँदछ लगभग 23 प्रतिशत। आधुनिक उपभोक्ताहरू स्थिरता जस्ता लाग्छ, त्यसैले किन एक पर्याप्त र सिर्जना गर्दै यादगार ब्रान्ड पहिचान.
यदि तपाईं विश्व अनलाइन मार्केटिंगमा धेरै नयाँ आगमनहरू जस्तै हुनुहुन्छ भने, तपाईं कसरी सिर्जना गर्ने बारे सोचमा हुनुहुन्छ एक ब्रान्ड पहिचान धेरै पैसा खर्च नगरी। भाग्यवस, त्यहाँ धेरै विधिहरू र उपकरणहरू उपलब्ध छन् जुन दुबै धेरै प्रभावकारी र सस्तो हुन्।
तपाईंको व्यवसायका लागि ब्रान्ड पहिचान बनाउने क्रममा तपाईंले गर्नुपर्ने केही चीजहरू तल दिइएका छन्।
कसरी ब्रान्ड पहिचान बनाउने सिक्ने कुनै उत्पादन बेच्न फरक छ
विगतमा, उत्पाद केन्द्रित मार्केटिंग सबै क्रोध थियो। तपाईको टोपी केवल एउटा उत्पादनमा झुण्ड्याउनु भन्दा तपाईको ब्रान्ड पहिचानलाई तपाईको व्यवसायको प्रत्येक पक्षलाई समाहित गर्नु पर्छ।
तपाईंले बुझ्नु आवश्यक छ कि आधुनिक उपभोक्ताहरूले कुख्यात छोटो ध्यान स्प्यान गरेका छन्। यसको मतलब तपाईसँग धेरै समय छ एक प्रभाव बनाउन तिनीहरूमा तपाईंको ब्रान्डि themको साथ। उपभोक्तालाई रुचि नहुन सक्ने यस उत्पादनलाई बहुमूल्य ढing्गले खेर पुग्दा लिडहरू उत्पादन गर्ने क्रममा ठूला समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ।
यदि तपाईंको ब्रान्डले उपभोक्ताहरूलाई उत्साहित गर्दैन भने, तिनीहरू केवल प्रतिस्पर्धीमा जान्छन्। यसैले तपाईंले यो निश्चित गर्नु आवश्यक छ कि तपाईंले ल्याउनुभएको ब्रान्ड पहिचान यादगार हो र यसलाई बुझ्न सजीलो छ।
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको ब्रान्ड पहिचान तपाईंको व्यवसाय प्रतिबिम्बित गर्दछ
जब तपाईले उपभोक्ताहरूले के हेर्न चाहन्छन् भनेर सोच्न आवश्यक पर्दछ, तपाईले नयाँ सीसाको पछि लाग्नु हुँदैन तपाईको व्यापारमा विकास भएको मूल मूल्यलाई हटाउनु पर्दैन। प्रायः जसो मुख्य कम्प्युटरहरू र मिसन स्टेटमेन्टले तपाईंको कम्पनीले दिशा निर्देशन गर्दछ तपाईंको मार्केटिंग र ब्रान्डि take लिनु पर्ने दिशा।
उपभोक्ताहरूलाई तुरुन्तै थाहा छ कि तपाइँको कम्पनी को बारे मा छ के अनिवार्य छ सुनिश्चित गर्नु। यसैले तपाईंले आफ्नो ब्रान्ड निर्माण गर्न सुरु गर्नु अघि तपाईं पाठकहरूलाई कुन सन्देशमा सन्देश पठाउन चाहनुहुन्छ भन्नेमा सone्लग्न हुन आवश्यक छ।
ग्राफिक्स र वेबसाइट प्रतिलिपि आफ्नो ब्रांड परिचय को एक विशाल हिस्सा हो
सम्भावित ग्राहकहरूमा राम्रो प्रभाव पार्नुपर्ने पहिलो स्थानहरू मध्ये एक तपाईंको वेबसाइटमा छ। तपाइँको वेबसाइट दुबै अपील र प्रयोग गर्न सजिलो छ भनेर पक्का गर्नु अपरिहार्य छ।
जब तपाइँको वेबसाइट डिजाइन गरिएको छ, तपाइँले ग्राफिक्स र वेबसाइट प्रतिलिपि प्रयोग भइरहेकोमा धेरै ध्यान दिन आवश्यक छ। तपाईंको वेबसाइटमा प्रयोग गरिएको तस्वीर र ग्राफिक्स तपाईंको ब्रान्डको प्रतिनिधि हुनुपर्छ।
तपाईंको व्यवसायको लागि आवाज खोजी गर्नु र यसलाई तपाईंको वेबसाइटको प्रतिलिपिमा प्रयोग गर्नु पनि महत्त्वपूर्ण छ। यदि तपाईं यो आवाज कसरी फेला पार्ने बारेमा अनिश्चित हुनुहुन्छ भने, सामग्री मार्केटिंग पेशेवरहरूसँग परामर्श एक राम्रो विचार हो। तिनीहरूलाई अधिकतम प्रभावको लागि तपाईंको सामग्रीको विकास र अनुकूलन गर्नमा कुनै समस्या हुनेछैन।
व्यावसायिक सहयोग पाउनु आवश्यक छ
पेशागत मद्दत बिना ब्राण्ड पहिचान विकास गर्न र यसलाई कायम राख्न प्रयास गर्न गाह्रो हुन सक्छ। व्यावसायिकहरूले तपाइँलाई कसरी सहजताका साथ ब्रान्ड पहिचान सिर्जना गर्ने देखाउने छन्।
के तपाइँ यस बारे मा अधिक जानकारी खोज्दै हुनुहुन्छ ब्रान्डि and र डिजाइन? यदि हो भने, निश्चित यी विषयहरूमा लेखहरूको लागि हाम्रो ब्लग जाँच गर्नुहोस्।
5 २०१ 2019 मा हेर्नको लागि शीर्ष Tre ट्रेन्डिंग फन्टहरू
लोगो डिजाइनको मनोविज्ञान पछाडि सिद्धान्तहरू →